Voice – Gold Channel Movies
Jan. 14, 2017 OCN
4Season4Jun. 18, 2021
Episode 1 Jun. 18, 2021
Episode2Jun. 19, 2021
Episode3Jun. 25, 2021
Episode4Jun. 26, 2021
Episode6Jul. 03, 2021
Episode7Jul. 09, 2021
Episode 8 Jul. 10, 2021
Episode9Jul. 16, 2021
Episode 10 Jul. 17, 2021
Episode 12 Jul. 24, 2021
ကဲ…၂ နှစ်နီးပါးလောက်စောင့်စားခဲ့ရတဲ့အဆုံးမှာတော့ Voice ပရိသတ်ကြီးမျှော်တလင့်လင့်ဖြစ်နေရတဲ့ Voice4ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Season တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအပြောင်းအလဲလေးရှိတတ်တာကတော့ Voice ရဲ့ ထုံးစံပေါ့နော်။ Voice Season 1 to3ကို OCN ကပဲ ပြသလာခဲ့ပေမယ့် Season4ကိုတော့ ဒီတစ်ခါ TVN ကလက်လွှဲယူပြီး ပြသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ အားလုံးသိပြီးကြတဲ့အတိုင်း မင်းသမီး Lee Ha Na က Golden Time Team ရဲ့ စင်တာမှူး Kang Kwon Joo နေရာကနေဆက်လက်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ မင်းသားကြီးဂျွန်စော Song Seung Heon က LAPD Team ခေါင်းဆောင် Derek Jo အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ စင်တာက မမချောချောလေး Park Eun Soo လည်း ပြန်လည်ပါဝင်ထားပြီး လတ်ပြတ်ကလေးနေရာမှာတော့ Winner အဖွဲ့ဝင် Kang Seung Yoon ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ Season ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဇာတ်အိမ်ရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားဟာ စင်တာမှူးဂန်လိုမျိုးလေသံတိုးတိုးကလေးကအစ ကြားနိုင်တဲ့ လူသတ်သမားဖြစ်နေတဲ့အခါ သူ့လိုမျိုး စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူသတ်သမားကို Kang Kwon Joo တစ်ယောက် ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ။ Sesason2ကစိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် PTSD လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါကို ခံစားခဲ့ရကာ ဆိုက်ကိုနီးပါးဖြစ်လာတဲ့ မင်သမီး Kang Kwon Joo ကကော လူသတ်သမားက သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေမလား။ LA ကနေ ပြောင်းလာပြီး LAPD (Los Angeles Police Department)ရဲ့ ခေါင်းဆောင် စုံထောက်ကြီး Derek Jo ပါ Golden Time Team နဲ့အတူတူ အမှုတွေဖြေရှင်းဖို့ ပါဝင်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်တွေနဲ့ အမှုတွေကို ဖြေရှင်းကြမလဲ၊ ပရိသတ်တွေကို Voice မှ Voice ဖြစ်နေရအောင် ထပ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ ဆွဲဆောင်ဖမ်းစားထားဦးမလဲဆိုတာတွေကို အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့ စနေနေ့တွေမှာ GC Team နဲ့အတူတူ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။
Translated by Winnie Ngoon and Phyo Thant
Original title 보이스
First air date Jan. 14, 2017
AyeChanAungJune 19, 2021Reply